मायामा उनिएका सपना – Sourya Online
मायामा उनिएका सपना
सौर्य अनलाइन २०६९ असार १८ गते २:२९ मा प्रकाशित
काठमाडौं, १८ असार । कला चलचित्रबाट करिअर सुरु गरेका निर्देशक गोपालचन्द्र लामिछानेले मूलधारको चलचित्रको पहिलो अनुभव सँगालेका छन्– प्रदर्शनरत चलचित्र किन लाग्छ मायामार्फत । उनको चर्चित कलासामग्री ‘बोक्सी’ भन्दा धारका हिसाबले बिल्कुलै पृथक् छ यो व्यावसायिक चलचित्र । पुरानै शैलीको कथावस्तु सही, यस चलचित्रमा उनले एउटा मनोरञ्जक प्याकेज निर्माण गरेका छन्, दर्शक लट्ठिएका देखिन्छन् । नेपाली चलचित्रलाई विदेशी चलचित्रको लेन्सबाट विश्लेषण नगर्ने हो भने यसलाई आशालाग्दो चलचित्र भन्न सकिन्छ ।
फिल्मले प्रश्न उब्जाएको छ– चर्को भागदौड र डिजिटल जमानामा पनि कसैलाई नि:स्वार्थ प्रेम गर्न सकिन्छ ? र, सकारात्मक उत्तर स्थापित गरेको छ– ‘सकिन्छ’ । प्रेमी–प्रेमिकाबीचको चोखो प्रेम, दिदी–भाइ अनि साथीसाथीबीचको आत्मीयताको मर्मस्पर्शी प्रस्तुति दर्शकलाई बाँधिराख्ने मुख्य हतियार हो । छाडा संवाद र अश्लील दृश्यको बोलवाला बढ्दै गइरहँदा यसले शालीन अनि अनुशासित संवाद र त्यस्तै पटकथामार्फत दर्शक खुसी पार्ने मेलो समातेको छ ।
दुई जोडी अल्लारे प्रेमीप्रेमिकाको कथा हो यो । नेपाली चलचित्रको परम्परागत शैली ‘जमिनदार’ यो चलत्रिमा पनि छ । तर, ऊ अरू चलचित्रको परम्परामा आउनेजस्तो सामन्ती छैन, गाउँलेको रगत, पसिना खाँदैन । उसैको छोरा हो विशाल, जो विदेशमा पढेर फर्केको छ । जमिनदारकै घरमा बसेर हुर्केकी डा. हिमानी
(उसकी बालसखा) सँग उसको प्रेमको टुसा पलाउँछ । अरू पात्र छन्– बेरोजगार केटो राजकुमार र उसकी प्रेमिका राधा । राधाकी आमाले छोरीसँग बिहे गर्न १० लाख रुपियाँ बैंकखातामा जम्मा गरिदिनुपर्ने सर्त राखेपछि राजकुमार खाडी राष्ट्र पुग्छ । आफ्नै घरमा काम गर्ने मान्छेको षड्यन्त्रमा फसेको विशालचाहिँ जेल पुग्छ । यही तनाबले गाँजिएको जमिनदार बाबुको पनि मृत्यु हुन्छ । लामा वर्षहरू जेलको चिसो छिँडीमा काटेपछि विशाल गाउँ फिर्छ । अब उसको उद्देश्य छ– आफूलाई षड्यन्त्रको चंगुलमा फसाउने भिलेनलाई दोहोलो कढाउनु, आफ्नो सम्पत्ति फिर्ता लिनु, रोमाञ्चक फाइट एवं डाइलगहरुको प्रस्तुतिमा बाँधिएर बाबुको मृत्युको बदला साँध्नु अनि आफूप्रतिको प्रेमप्राणयको अनुराग सम्हालेर बसेकी हिमानीप्रतिको पुरानो प्रेमलाई जीवित बनाउनु । यस्तो कथावस्तुलाई बाँध्ने दृश्य र संवाद कलात्मक छन् ।
माथिसम्मको कथावस्तु फ्ल्यासब्याक प्रस्तुतिमा छन् । जेलबाट छुटेपछि विगत घटनाको जलनलाई शान्त पार्न जाँडमा डुबेको विशालका गतिविधिबाट फिल्मले प्रारम्भिक लय समात्छ । प्रेम र प्रेमिकाका खातिर खाडी मुलुकमा रगतसरि पसिना बगाएर १० लाख कमाएर फर्केको राजकुमारसँग उसको दोस्ती राम्रो जम्छ । यो दोस्ती गहिरिँदै जाँदा उनीहरूबीच एकअर्काको संरक्षणमा लागि पर्ने भावनाको जन्म गराउँछ । गाउँको परिवेश, भाषा–शैली, गीत र यथार्थ लाग्ने पात्रको दु:खले फिल्मलाई मौलिक पहिचान दिएको छ ।
निखिल उप्रेती, राजवल्लभ कोइराला, झरना थापा, गरिमा पन्त, रवि गिरीजस्ता स्थापित अनुहारका बीचमा नयाँ अनुहार शंकर घिमिरेको प्रतिभा सकेजति निचोरेर उनलाई सम्भावना बोकेका कलाकार प्रमाणित गरेका छन् गोपालले । अविनाश श्रेष्ठको लेखन, लक्ष्मण शेषको संगीत, दीपक वज्राचार्यको छायांकन बिझाउँदैनन् । प्रेमको दार्शनिक मूल्य खोतल्न निर्देशकले गरेको प्रयास सफल छ ।